Hlela idilesi ye-Direct Direct kunye ne-Arhente yeRevenue Revenue Agency
Urhulumente waseKhanada uye waxhaswa ukuba acwangcise ukusetyenziswa kwamaphepha okuhlola iirhafu zorhulumente. Abo bangabhalisi kwi-deposit ngqo bangakwazi ukufumana iphepha lokuhlola, kodwa urhulumente uzama ukuhambisa abantu abaninzi ngangokunokwenzeka kwi-option ye-elektroniki. Kukhethwa ngokukhethekileyo (kodwa kunyanzeliswa kakhulu) nge-perk nabani na ofumana iireki zorhulumente nayiphi na uhlobo.
Urhulumente waseCanada uqalise umkhankaso wayo wokuguqula abantu kwikhefu ngqo kwi-2012.
Kuqikelelwa ukuba indleko yokuvelisa isheke yayingama-80 cm ngelixa uhlawula idiphozithi ngqo kwiRhasida malunga no-10. Amagosa karhulumente athi balindele ukulondoloza malunga neerandi ezingama-17 ngonyaka ngonyaka kunye nokuguqulwa ukuhambisa idiphozithi, kwaye kuya kuba "ukhetho".
Uhlolo lukaRhulumente lusathunyelwa ngeposi kwiCanada kubantu abahlala kwiindawo ezikude apho kuncinci ukufikelela kwiibhanki. Zonke ezinye iintlawulo ezimalunga no-300 zikarhulumente zihanjiswa nge-deposit ngqo yebhanki. Njenga-payroll idipozithi ngqo, imali evela kwiinkqubo zaseCanada ifumaneka ngokukhawuleza ekukhutshweni, endaweni yokuba umemele ukuba alinde isheke ukuze afike kwi-imeyile.
I- Arhente yeRevenue Revenue (i-CRA) ilawula iintlawulo zeentlobo ezahlukeneyo zeenkqubo, kwaye zonke ziyakulungele ukuhlawulwa ngqo kweentlawulo. Uluhlu lubandakanya:
Ukubuyiselwa kwemali yentlawulo yaseKhanada
Ikhredithi yeGST / HST kunye nayiphina intlawulo yephondo
intlawulo yengeniso yerhafu yengqesho (i-WITB)
Inkokhelo yentlawulo yerhafu ye-Canada (i-CCTB) kunye neentlawulo zephondo ezihambelanayo
Intlawulo ye-Universal Care (UCCB)
Shintsha kwiNkcukacha Zomntu
Kukho iindlela ezininzi zamaKhandi anokucela idiphozithi ngqo kwiintlawulo okanye ukwazisa i-CRA yenguqu kwiibhanki okanye ulwazi lweposi , olufunekayo.
Ungasebenzisa i- Akhawunti Yentlawulo ye-Akhawunti Yakho kwi- Akhawunti okanye thumela irhafu yengeniso yakho ngenzuzo ngeposi. AmaKhanadi angakwazi ukuzalisa ifom yokuBhaliswa kweDisposithi ngokuthe ngantoni, kwaye uyithumele ngeposi.
Ukuba ukhetha ukuhlaziya ulwazi lwakho ngefowuni, fowuna 1-800-959-8281. Unokufumana uncedo lokugqiba ulwazi oluchanekileyo, ukuqala okanye ukukhansela inkonzo, ukutshintsha ulwazi lwakho lwebhanki okanye ukongeza ezinye iintlawulo kwi-akhawunti ye-deposit ekhoyo.
Yazisa i-CRA ngokukhawuleza malunga nokutshintshwa kwidilesi okanye zakho iintlawulo, nokuba yi-deposit ngqo okanye i-imeyile, inokuphazamiseka. Ukwazisa kwakhona i-CRA ngokukhawuleza ukuba uyatshintsha i-akhawunti yakho yasebhanki. Musa ukuvala i- akhawunti yebhanki yakudala uze ufumene intlawulo entsha.
I-Deposit Direct ayifuni
Xa kuqala uqala ukunyusa kwidiphozithi ngqo, bekukho ukudideka malunga nokuba kuya kufuneka ntoni kwiintlawulo zikaRhulumente waseCanada. Kodwa abo banqwenela ukufumana iincwadi zokuhlola iphepha bangakwazi ukuqhubeka benze njalo. Urhulumente akayi kukhangela iphepha lihlola ngokupheleleyo. Ukuba awunomdla kule nkqubo, ungabhalisi.
Indlela yaseNewfoundland neLabrador enegama layo
PM Jean Chretien: I-Street Fighter eneziNkokeli zezopolitiko
Ziziphi izibilini eziqinileyo eziya kuyenza ngeGrey Golf yakho
I-Talk "Clouds" kaKelvin
Iingcebiso zoLawulo lweeKlasini zabaTitshala abaziTitshala
I-Biography kaRobert Venturi noDenise Scott Brown
UClyde Barrow Wabhala incwadi kuHenry Ford
13 Iingcaphuno eziMnandi zokuBamba iimfazwe kwiTable Tablegiving
Iifoto EZINYE I-Paranormal
Iimfuno zamaMidiya ezeNtlalo: Iindidi, iMfundo kunye neKhetho lokuSebenza
I-Conflict yeHong Kong ne-China